Amanyathelo okhuselo lofakelo lwezinyuko ezingenazintsimbi - China Foshan Hermes Steel
Amanyathelo okhuseleko kufakelo lwezinyuko ezingenazintsimbi
Izinyuko ezingenazintsimbi zithandwa ngaphakathi nangaphandle, kwaye ikwayenye yezinyuko eziqhelekileyo. Yintoni ekufuneka sinikele ingqalelo kuyo xa ufaka izitepsi zentsimbi engenasici?
1. Amanyathelo okuthintela ukufakelwa kwezibonda zesinyithi
1. Ukufakwa komgaqo kufuneka kwenziwe ngokungqinelana neemfuno kunye nokulandelelana komgca weinki wolwakhiwo phezulu ukusuka kwindawo yokuqala.
2. Iipali eziphelweni zombini zeqonga ekuqaleni kwezinyuko kufuneka zifakelwe kuqala, kwaye ufakelo kufuneka lubotshwe.
3. Ngexesha lokwakha i-welding, intonga ye-welding kufuneka yenziwe ngezinto ezifanayo nezinto ezisisiseko. Ngexesha lofakelo, ipali kunye nenxalenye efakelweyo kufuneka zilungiswe okwethutyana yi-welding spot. Emva kokuphakama kunye nokulungiswa okuthe nkqo, i-welding kufuneka iqine.
4. Xa iibholiti zisetyenziselwa ukudibanisa, imingxunya kwipleyiti yesinyithi emazantsi epali kufuneka ilungiswe ibe yimingxunya ejikelezileyo ukuthintela iibholiti zokwandisa zingangqinelani nezikhundla zazo. Uhlengahlengiso oluncinci lunokwenziwa ngexesha lofakelo. Ngexesha lolwakhiwo, sebenzisa isixhobo sokugrumba sombane ukubhola iibholiti zokwandisa emazantsi epali yofakelo, qhagamshela ipali kwaye uyilungise kancinci. Ukuba kukho impazamo kulungiso lofakelo, lungelelanisa nge-gasket yesinyithi. Emva kokulungiswa nkqo kunye nokuphakama, qinisa izikrufu. ikepusi.
5. Emva kokufaka iipali kumacala omabini, sebenzisa indlela efanayo ukufaka iipali eziseleyo ngokutsala intambo.
6. Ufakelo lwesibonda kufuneka luqine kwaye lungabi lukhululekile.
7. Iipali ze-welding kunye ne-bolt iinxalenye zokudibanisa kufuneka ziphathwe nge-anti-corrosion kunye ne-anti-rust emva kofakelo.
Okwesibini, inkqubo yokufakwa kweentsimbi zokubamba izinyithi
1. Ukufakwa kweentsimbi zokubamba zentsimbi ezingenasici
Ukufakwa kwamalungu afakelweyo (izithuba ezigxunyekwe ngasemva) kwizinyuko ezibethelelwe kwiindawo ezingafakwanga zinokufumana kuphela iindawo ezingaphakathi. Le ndlela kukusebenzisa iibholiti zokwandisa kunye neepleyiti zentsimbi ukwenza izihlanganisi zangemva kokufakwa. Kuqala beka umgca kwisiseko sokwakha esidlangalaleni kwaye unqume ikholamu Lungisa indawo yenqaku, emva koko ugrumbe umngxunya kumgangatho wezinyuko nge-drill yempembelelo, emva koko ufake i-bolts zokwandisa. Iibholiti zigcina ubude obaneleyo. Emva kokuba iibholiti zibekwe kakuhle, qinisa iibholiti kunye ne-weld nut kunye ne-screw yokuthintela i-nut kunye neplate yensimbi ekukhululeni. Unxibelelwano phakathi kokubanjwa kwesandla kunye nomphezulu wodonga ikwamkela le ndlela ingentla.
Ukubeka ngaphandle ngenxa yolwakhiwo oluchazwe apha ngasentla kunokubangela iimpazamo. Ke ngoko, ngaphambi kokuba kufakwe ikholamu, umgca kufuneka uphinde ubekwe kwakhona ukumisela ukuchaneka kwendawo yeplate engcwatyelweyo kunye nepali ethe nkqo. Ukuba kukho nakuphi na ukuphambuka, kufuneka kulungiswe kwangexesha. Kufuneka kuqinisekiswe ukuba zonke iikholamu zensimbi ezingenasici zihleli kwiipleyiti zentsimbi kwaye zinokudityaniswa.
3. Isihlalo sokudibanisa iingalo sidityaniswe kwikholam
Phambi kofakelo lwesandla sokubambela kunye nekholamu edibanisa ikholamu, umgca ubekwa ngendlela edibeneyo, kunye nomsele wenziwe ngomatshini kwisiphelo esingasentla ngokubhekisele kwinqanaba lezitepsi kunye nokujikeleza kwesandla esisetyenzisiweyo. Emva koko beka i-handrail ngqo kwi-groove yekholamu, kwaye uyifake ngokubethelwa kwebala ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye. Iimbambo zokubamba ezikufutshane zifakwe ngokuchanekileyo kwaye amalungu adibeneyo. Emva kokuba imibhobho yentsimbi ekufutshane ikhutshiwe, amalungu adityaniswa nge-electrode zentsimbi. Phambi kokuwelda, amabala eoyile, amaburtsi, amabala erusi, njl.njl.Ubungakanani be-30-50mm kwicala ngalinye le-weld kufuneka zisuswe.
Ezintathu, besila kunye ipolishi
Emva kokuphakanyiswa kunye neentsimbi zokubamba zonke zenziwe nge-welding, sebenzisa i-grinder yokusila yevili egudileyo ukuhambisa ii-welds de i-welds zingabonakali. Xa ipolishi, sebenzisa iflannel yokugaya ivili okanye waziva ukuba upolishe, kwaye usebenzise unobumba wokucoca ohambelanayo ngaxeshanye, de kube iyafana ngokusisiseko kunye nezinto ezikufutshane, kunye nomthungo we-welding awubonakali.
4. Emva kokufakwa kwengqiniba, iincam zombini ze-armrest ethe nkqo kunye neziphelo ezibini zentonga ethe nkqo zilungiswe okwethutyana yi-welding spot.